Filtrer les éléments par date : mardi, 12 novembre 2019
mardi, 12 novembre 2019 14:26
Ambatomainty: Ijaliana ny jiro sy rano
Gropy mpihary herinaratra tokana sisa mandeha amin’ireo telo nisy teo Ambatomainty, Faritra Melaky. Sady amokarana herinaratra hamatsiana jiro no ampiasaina isintomana rano hotsinjaraina amin’ny mpanjifa ny omen’io gropy hany sisa mandeha io.
Ijaliana ny jiro sy rano eto Ambatomainty, ary manomboka miteraka disadisa satria misy ampahany mahazo nefa ny ankamaroan’ny mponina tsy misitraka.
Akademia Miaramila: Mpiofana ho mpanamory nindaosin’ny fahafatesana
Tratry ny tsy fahasalamana ny sasany tamin’ireo ho mpanamorin’ny Foloalindahy noraisin’ny fanjakana, ka manaraka fiofanana ara-miaramila ao amin’ny Akademia Miaramila nanomboka tamin’ny herinandro lasa iny.
Iray no niditra hopitaly halina, dia maty androany maraina tao amin’ny HOMI Soavinandriana-Antananarivo.
mardi, 12 novembre 2019 14:20
Niditra hopitaly tao amin’ny HOMI Soaninandriana-Antananarivo izy ireo, nindaosin’ny fahafatesana ny iray.
mardi, 12 novembre 2019 08:04
Besalampy: Tapaka ny jiro sy rano
Fahasimban’ny milina mpamokatra herinaratra no voalaza fa fototr’ity fahatapahan-jiro sy rano aty Besalampy faritra Melaky ity.
mardi, 12 novembre 2019 08:03